Etu esi egbutu okporo ụzọ Blog gị na ọkara | Martech Zone
Anaghị m atụgharị onye ọ bụla ga-achọ ibelata okporo ụzọ ha na ọkara na blọọgụ ha. Agbanyeghị, ọ mara mma na ọnụ ọgụgụ m ma na-etinye obere nrụgide na m ịde blọgụ kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na m gaa n'ihu na-ede blọgụ na-agbanwe agbanwe, okporo ụzọ m na - eto - ikekwe ihe ruru ndị ọbịa 100 kwa ụbọchị kwa ọnwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anaghị mde blog maka otu ụbọchị, okporo ụzọ m na-ada ọkara. N’izuụka a gara aga, anọ m na-arụsi ọrụ ike na njikọ m kwa ụbọchị abụrụla ọtụtụ ọdịnaya m - ọbụnadị na-akpali ezigbo enyi m ime mkpesa.
Anaghị m ịde blọgụ n'ihi enweghị ọdịnaya, yabụ m kwesịrị iweghachi onwe m n'ọnọdụ dị mma. Enwere m ọtụtụ ozi ịkekọrịta na ọganihu na-eto eto na teknụzụ ahịa n'ịntanetị - Achọrọ m ịdọkwu aka na ntị na oge m na-ebipụta akwụkwọ. Nọgidenụ na-, m na-na na ịrị elu!
Tags: ịde blọgụịde blọgụ okporo ụzọụlọ ọrụ ịde blọgụdobe okporo ụzọ
Igodo atọ iji mejupụta ọdịnaya gị
Feb 24, 2009 na 2:51 PM
Ahụrụ m nghọta n'anya ebe a. M na-eche ka ọ ga - esi bụrụ ma ọ bụrụ na egosiputa stats na peeji ahụ oge niile.
Echere m na nke ahụ ga-arụ ọrụ naanị na ibe ngwaahịa na saịtị nyocha ma e jiri ya tụnyere blog nkeonwe. M na-eso ndị mmadụ n'ihi echiche ha abụghị stats ha. Mana ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ma ọ bụrụ na ụmụ okorobịa kacha elu bụ ụmụ okorobịa.
Jisie ike ịbanye na ụda. M na-agbasi mgba ike na ya.
Feb 24, 2009 na 5:26 PM
Ọmarịcha izu ụka izu ike n'ebe ahụ. Ihe ndị mere mgbe ndị mmadụ sọfụ ma gụọ ahịa dị mkpa blog posts 24/7! M ga-enwe mmasị ịhụ ma ọ bụrụ na trending bụ agbanwe agbanwe n'ihi na n'oge gara aga ọtụtụ ọnwa.
Feb 24, 2009 na 8:58 PM
Otu ihe ka m na achota. Naanị ihe m nwere ike ịme? Nweta mgbasa ozi! 🙂
Jul 29, 2009 na 6:32 PM
Hmmm… .. Nke a bụ kpam kpam ihe ọhụrụ, ị chọrọ bee okporo ụzọ na ọkara.
Enwerem ohuru ohuru,
Achọrọ m ọtụtụ ndị mmadụ kwa ụbọchị,
Ọ bụrụ na ị chọghị imegharị ndị mmadụ nye m…. :))